Ndụ spawn mmiri na iceberg naanị ya na Abbyrium Pole Idle | Gam akporosis
Mee ka ndụ mmiri gaa na mmiri naanị mmiri Arctic na Abbysrium Pole na-abaghị uru
Abbyrium osisi bụ ọhụrụ na-abaghị uru nke ị ga-mejupụta owu na-ama iceberg na a dum usoro nke aquatic anụmanụ dị ka penguins, akàrà, oké osimiri ọdụm na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị na ị ga-anọ na nke a, mana ị ga-enwe ike ịmeghe azụ na algae.
Oge nkịtị nke anyị ga-anwa pịa ihuenyo dị ka ngwa ngwa anyị nwere ike ma melite ma mepee ụmụ anụmanụ ọhụrụ mmiri iji nọgide na-agbanwe. Eziokwu bụ na ọ bụ egwuregwu ejiri ụdị ndụ dị iche iche nke mmiri ị nwere ike iwepụta, ewepụ n'eziokwu na ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ etu ha si emekọrịta onwe ha mgbe ị chọghị ịpị ihuenyo ahụ na mkpịsị aka gị animatedly.
1 Anaghị Ọrụ na Arctic
2 Polar bea, arctic foctic na ọtụtụ ndị ọzọ na Abbyrium Pole
3 Ndụ mmiri na ekwentị mkpanaaka gị
Anaghị Ọrụ na Arctic
Abbyrium osisi bụ ike nke na-ewere gị na ihuenyo gị mobile ndụ na arctic na iceberg nke ahụ ga-amalite kpam kpam. Site na igodo anyi anyi ga - enwe ike inweta ihe ndi di nkpa iji meziwanye mmeputa, dika o na - eme na udiri oru a, na imeghe otutu umu anumanu, azu na algae.
Anyị ga-enwe ike iji akàrà jupụta na iceberg ahụ, nke ọ bụla nwere ọnụ ahịa ya, iji hụ ka ha si bido ndụ ha na iceberg ahụ n’enweghị ihe ha mere. Abbyrium Pole bụ otu n'ime egwuregwu ndị ahụ ebe anyị nwere ike ịtụgharị uche na nkọwa ụfọdụ na-enye ya a pụrụ nnọọ iche mgbe.
Dị ka ndị ọzọ na-abaghị uru ọ dị mkpa na anyị nwere ike itinye ego na ndozi imepụta ihe na anyị nwere ike ịhọrọ iru anụmanụ ndị ahụ nwere nnukwu ọkwa na ọkwa dịka whale ma ọ bụ pola bea n'onwe ha. Eziokwu bụ na ị ga-enwe ọtụtụ ha dịgasị iche iche ka ike ghara ịgwụ gị n'izu.
Polar bea, arctic foctic na ọtụtụ ndị ọzọ na Abbyrium Pole
na Olu olu na-enyekwa ya isi ya iji tinye aka ahụ nke agba ma n’elu ma na akuku aisbeg nke meturu omimi nke oke osimiri. Akụkụ a na-adọrọ mmasị, ebe ọ na-enye ya ọtụtụ ndụ ka ọ bụrụ na dịka anyị kwuburu na mbụ, anyị na-anọ ọtụtụ oge na-atụgharị uche na ndụ niile emere.
Echere m na anyị ga-ahụ ọtụtụ penguins na-egwu mmiri, whales surfacing ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ndị ahụ nke azụ na-agagharị n'otu na ihuenyo ekwentị anyị. Anyị na-ekwukwa banyere freemium, yabụ ị nwere ike nwetaworị echiche nke ihe ọ pụtara na ụlọ ahịa na ndị micropayments ndị dị ugbu a.
Abbyrium Pole bụ egwuregwu kwesịrị igwu egwu, na agbanyeghị na menu anaghị edo anya dị ka anyị ga-achọ, n'ihe gbasara nkeji ole na ole ị nwere ike ịme ihe niile ọ na-enye. Ọ dị na Spanish, ọ bụ ezie enwere ụfọdụ nsụgharị na-emezighi nke ọma. Ihe anyị na-amasị bụ ọnụ ọgụgụ nke nkọwa ọ na-enye na otu o si enye gị ohere ịse foto nke anụmanụ ọhụrụ agbachi agbachi.
Ndụ mmiri na ekwentị mkpanaaka gị
Ee ee, ọ bụ akụ na-ewe egwuregwu. Nnukwu anụmanụ dị na ihuenyo, yana ọbụlagodi na enwere ike ịbanye ọnọdụ enweghị igwefoto pụtara na ọ ga-adọta batrị ahụ nke ọma, yabụ ị maralarị na ịnweghị ike iji ekwentị ọ bụla jee ije ka ọ rụọ ọrụ zuru oke.
Anya bụ ihe atụ nke ihe ị ga-eme na egwuregwu mkpanaka. Anyị na-ahapụ mmetụta nke oyi na ndụ na arctic na ọ na-ewepụta ma nhazi nke umu anumanu na umu osisi na anyị ga-ahụ na ihuenyo. Egwu a dikwa nma nke oma ma n’izugbe anyi nwere oru zuru oke. Anyị na-ahapụ gị gafere ebe a ọzọ na-abaghị uru, ma nke ahụ na-aga ụyọkọ kpakpando.
Abbyrium Pole bụ ihe dị iche na-abaghị uru na ndị ọzọ nke ahụ na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ndụ mmiri ị ga-ewepụta na ekwentị mkpanaaka gị. Ọ bụrụ na ụdị egwuregwu ndị a na-amasị gị t'ẹ b'ọ dụkwa onye a-phụ penguin, ị ga-ahụ ya n'anya, yabụ na-ewe oge iji wụnye ya.
Onye edemede: 66%
Na -emepụta ndụ mmiri n’elu mmiri
Ọtụtụ anụmanụ na azụ ịmeghe
Na-achọ ihe onwunwe
Mgbata Kpatụ Azụ - Osisi Abisinrium
Developer: Njikọ Wemade
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Mee ka ndụ mmiri gaa na mmiri naanị mmiri Arctic na Abbysrium Pole na-abaghị uru
Tecno Spark Go Plus, ọhụụ ọhụrụ dị ala na-efu ihe dị ka euro 80
PUBG Mobile 0.16.5 biara na oge ohuru nke Pass Royale, onodu ohuru na ama egwuregwu arena